Nei Spain iri kudzikisira mukana wakakura wekushanya kwenyika?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Nei Spain iri kudzikisira mukana wakakura wekushanya kwenyika?
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • misangano • nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
World Tourism irikugadzirira ramangwana rakanaka ne COVID iri kudzorwa.
Iyi ndiyo mhinduro yevakawanda muindasitiri yepasirese yekushanya neyekushanya.
Kuita kuti Tourism Yenyika ishande zvakare zvinotora vatungamiriri nevanhu vane chiratidzo. Izvo zvinotorawo vanhu vanoda uye vanokwanisa kuita.
World Tourism inoda rubatsiro rwekukurumidzira uye UNWTO yanga ichitadza kupa hutungamiriri, dzimwe nguva ichiramba kufambira mberi nemitambo yehunyanzvi neyematongerwo enyika.
Saudi Arabia yakatora chinzvimbo chemutungamiri wepasirese pamwe nenyika dzakakosha dzeUNWTO.
Iyo Saudi Arabia Ministry yekushanya yakakoka 1000 epfungwa dzakajeka mukushanya kune ichauya Investment yeHumanity Musangano muRiyadh.
Sekureva kwenhengo yeiyo World Tourism Network, Nguva hombe yekushanyirwa kwenyika iri mukugadzirwa muHumambo hweSaudi Arabia.
Tourism yave ichipfuura nematambudziko asingabviri kubvira kutanga kwa2020 nekuda kweCVV-19 denda.
MuSaudi Arabia, Gurukota Rezvekushanya HE Ahmed Al-Khateeb anga achiratidzira kumeso kwete chete munyika yake. Akange ari nyeredzi inopenya yetariro kubva kuCaribbean kuenda kuAfrica.
Humambo hwakapa mabhiriyoni emadhora kwete chete kusimudzira kugona kwayo kwekufambira mberi asiwo kubatsira pasi rose kuchengetedza chikamu ichi chakayangarara.
The World Tourism Sangano (UNWTO) iri kuburikidza nedambudziko rehutungamiriri neSecretary-General wayo achitamba mutambo wakapetwa.
Saudi Arabia yaivepo kubatsira zvinyoronyoro uye nemari. Muna Chivabvu gore rino, UNWTO yakavhura nzvimbo yematunhu muRiyadh. Zvakare WTTC, iyo UK yakamisikidzwa sangano inomiririra vazhinji veakazvimiririra vane chekuita pachedu mune yepasirese yekufambisa uye yekushanya indasitiri yakavhura nzvimbo yedunhu muRiyadh.
Ichiona mamiriro akaoma UNWTO yaive mune isina kukwana rutsigiro kubva kuSpain chaicho, Saudi Arabia yakaratidza kufarira kwayo kuunza muviri wepasi rose kubva kuMadrid kuenda kuRiyadh.
Kufamba kwakadaro kwechokwadi kunoda kubvumidzwa nenhengo dzeUNWTO kumusangano unouya weUNWTO General kuMorocco. Nyanzvi padhuze nenyaya iyi dzakafanotaura kuti mavhoti anodiwa kuti afambe akadaro akange atove akachengetedzwa, kunyangwe hazvo humambo husina kumbokumbira zviri pamutemo.
Runyerekupe rwe kufamba kwakadai kwakaita kuti Spain nevamwe veEU vabatanidze kupfuura kuda kuziva. Dhipatimendi inofamba kuseri kwechiitiko ichi yaive mukutenderera kuzere, zvinoenderana nekuvimbika eTurboNews Zvitubu.
Mumiriri weUNWTO anobva kunyika yeEU achivimba zvakanyanya nekushanya akaudzwa eTurboNews, iye / aive nemvumo yekuvhota sezvaanoda, uye aigona kuvhota kuti afambe kana pavhoti.
Mutungamiri weSpain akadana Saudi Muchinda inenge mwedzi yapfuura. Izvo zvainzi chikonzero chekufona kwaive chishuwo naRiadh pane chingangoitika chinzvimbo chepamusoro cheUNWTO.
Mavhiki maviri apfuura iyo Munyori Mukuru weUN António Guterres ndakabatanidzwa, uye chirongwa ichi chakamiswa zvichienderana nechibvumirano chinofanirwa kupedzwa pakati peGurukota rezveKushanya muSaudi nemumwe wake, maSpinisita eVakashanyi.
Mumwe munhu anoziva nehurukuro iyi pakati peSaudi Arabia neSpain akaudza eTurboNews: “Nhaurirano pakati peSpain neSaudi Arabia dziri kuenderera mberi asi divi reSaudi rakanetsekana nekukasika kwebudiriro. FII kupera kwaGumiguru ichave inguva huru yekushanya, nevatungamiriri vazhinji nevatungamiriri vemabhizinesi muRiyadh. Ngativimbei kuti Maroto aripo. ”
Hon Hon Reyes Maroto ndiye Gurukota rezveKushanya kuSpain.
Nyanzvi inozivikanwa uye inoremekedzwa muEurope padhuze neUNWTO, uyo aisada kudaidzwa zita akaudzwa eTurboNews:
"Kana Spain ichifunga kunonoka nzira zvinoreva kuti vari kutadzisa Saudi Arabia kuramba ichiratidzira kuendesa UNWTO kuRiyadh, saka vanogona kunge vari kukanganisa. Pachine nguva yekuPush. Parizvino, Maroto ari kuItari, pachiitiko chekutengeserana, uye chaanotarisa hachisi chekushanya. "
Imwe sosi yakaudzwa eTurboNews"Zvinotaridza kuti pane kuzvipira neSpain pazvinhu zvakakosha Saudi Arabia yakumbira kudzivirira danho reHeadquarter iri kukumbirwa."
Nekudaro, zvinoitawo kunge kumhanyisa kupedzisa kuzvipira uku kungave iri nyaya inovhiringidza maSaudis.
eTurboNews yakasvika kune vese veSpanish uye Gurukota reSaudi rekushanya. Hapana kumwezve kujekeswa kwakagamuchirwa.
4 AS yakasimudzirwa kuvakazve kusimba kweIndonesia ...
Stephen Asiimwe kutungamira Uganda Private Tourism Sector
Hybrid City Alliance inobatana nemauto neBestCities...
Vienna inosarudza kuchengeta meya anodiwa naAdolf Hitler
Bartlett Anorumbidza American Caribbean Maritime Foundation ...